GoodData: SaaS Na Nchọpụta Ọgụgụ Azụmaahịa | Martech Zone
Wenezde, August 29, 2012 Tọzdee, Febụwarị 25, 2016 Douglas Karr
Dị ka ndị na-ere ahịa, data jupụta anyị. Naanị ụnyaahụ m na-emepe emepe SEO ọganihu akụkọ nke wetara m nsuso n'usoro, Data Webmasters, Nchịkọta Google Analytics na Hubspot iji tinye usoro metrik dị mkpa ma hazie mkpesa iji hụ na ọ ziri ezi.
Nzuzo Azụmaahịa Nchọpụta (BI) anọwo na oghere Enterprise ruo nwa oge ma bụrụkarị ndị ahịa / ntinye ihe nkesa na ntinye ogologo oge… oge ụfọdụ. Ihe ngwọta BI ga-enyere m aka iwepụta data sitere na nke ọ bụla na sistemụ ndị ahụ ma wuo ebe nchekwa dị na nzacha, na-agbanwe ma na-ewepụta data na usoro nke ga-abawanye.
EziData bụ sọftụwia dị ka sọftụwia azụmaahịa nwere ọgụgụ isi nke nwere ikike iweta ihe data dịpụrụ adịpụ, ịhịa aka na data ahụ, ma mejupụta dashboard, ihe ngosi arụmọrụ (KPIs) na mkpesa. Nke a bụ onye ahịa na - agwa GoodData iji tinye akwụkwọ na metrik dị mfe. Jide n'aka na inyocha GoodData si Youtube ọwa - n'inye otutu webinars na ihe ngosi banyere otu esi emejuputa ikpo okwu ha.
Dị ka edepụtara na ha atụmatụ peeji nke, ndị a bụ isi atụmatụ GoodData:
Dashboards na Akụkọ - Jiri nlezianya jiri akụkọ mkpọ ma ọ bụ ike dị omimi wee dọọ data gị site na iji tebụl dị mkpa ma ọ bụ eserese. Ebumnuche na ijiji na ịpịgharị aka nke oke. Kọwaa omenala na usoro ndebiri dabere na ndebiri, dakpuo n'ime ma ọ bụ gafee sel, kọwaa nchịkọta kọlụm na sekọnd ole na ole, nweta ọnụ ọgụgụ mpempe akwụkwọ na-agbasa ngwa ngwa site na akara ngosi, ịdọrọ na dobe nhazi usoro eserese ma chịkwaa ntụgharị aha onye ọ bụla.
Metrik na Igosi Igosi Ọrụ Nrụ Ọrụ - GoodData na-enye ndị ọrụ ohere itinye ikike nke ọtụtụ usoro akọwapụtara akọwapụtara. GoodData nwekwara ike ịmepụta ọnụọgụ omenala nke na-ekwu banyere ọnọdụ azụmahịa pụrụ iche, kọwaa KPI ma soro arụmọrụ megide ebumnuche.
Ad Hoc Nyocha - Mee nyocha na-ewu ewu na oge eserese. Iberi na dais data site na iji intaneti kedu ihe “kedu na etu esi eme” ma kọwaa omenala na metrik ụwa / mpaghara, nzacha na ọtụtụ ndị ọzọ Jiri ihe inyeaka na-akpaghị aka itinye na nhọrọ, ogo, nso ma ọ bụ ihe nzacha na-agbanwe agbanwe. Mee nyocha-ọ bụrụ na nyocha site na ịgagharị eduzi ma ọ bụ gbadata ma merụọ ya na asụsụ nwere ọtụtụ akụkụ dị ike ma na-agụta.
Mmekọrịta na Shakekọrịta - Imekọrịta na ịkekọrịta ọrụ, akụkọ na nsonaazụ ya na ndị ọrụ ibe na njikwa na ezigbo oge. Sochie na oditi oru ngo. Nkọwa na mkpado akụkọ na oge ahụ. Kpọọ ndị mmadụ ka gị na oru gị kwurịta ma kesaa ọganiihu. Gbaa ume na oge. Embed ma ọ bụ ozi email na dashboards na iji nkesa anatara.
Ngwa-Wuru Ngwa - Ngwa GoodData na-akpaghị aka jikọtara ya na isi mmalite data dịka Google Analytics, Salesforce na Zendesk, ebe ọ bụ na ha niile na-ewu n'elu ikpo okwu GoodData, ị nwere ike ịgbatị ha ngwa ngwa site na ịtinye data ma ọ bụ ịhazi usoro metrics na-egosipụta azụmahịa gị pụrụ iche.
Ọ bụrụ na ị bụ teknụzụ dị n'ịntanetị na data, ị nwekwara ike ịghọ a onye data na GoodData. GoodData na-enye ike iji zụlite zuru ezu nchịkọta ngwaahịa n'ime ahịa n'ime ụbọchị 90 na-enweghị nnukwu ọrụ nchịkwa. Ndị ahịa gị na-enweta ohere niile nke GoodData's n'elu ikpo okwu: dashboards emegoro ụzọ, nhụta dị elu, iberi na ịkpụ, usoro metọọ, mmekorita na ndị ọzọ.
Tags: biọgụgụ isi azụmahịaezi dataWebinar Ahịasaassoftware dị ka ọrụ